သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် Mesolimbic အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ (2007) - သင့် Brain On Porn
အသက်ကြီးလူကြီးများ (2007) တွင် Mesolimbic အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့
Cereb Cortex ။ 2007 ဒီဇင်ဘာ;17 (12): 2940-8 ။ EPub 2007 မတ်လ 23 ။
Bunzeck N ကို1, Schütze H ကို, Stallforth S က, Kaufmann J ကို, Düzel S က, Heinz HJ, Düzel E ကို.
ပုံမှန်အိုမင်းသည့် dopaminergic midbrain (substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ SN / VTA), မကြာသေးမီက hippocampus အပါအဝင်တစ် mesolimbic ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု processing အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ်အရှုံးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့သံလိုက်လွှဲပြောင်းအချိုး (MTR) ကို အသုံးပြု. mesolimbic စနစ်၏အသက်အရွယ်-related ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယိုယွင်း quantified နှင့်အသစ်အဆန်း stimulus မှ mesolimbic hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (နာရီ) နှင့်အတူကဆက်နွယ်နေကြောင်း။ 55 နှင့် 77 နှစ်အကြားနှစျဆယျ့တစျကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးရှားပါးထံမှအသစ်အဆန်းမှ mesolimbic နာရီခွဲခြားရန်ခွင့်ပြုအမြင်အာရုံ oddball ပါရာဒိုင်း, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence နှင့်ပစ်မှတ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ လက်ျာ SN / VTA နှင့်အသစ်အဆန်းခွင့် hippocampus အတွက်နာရီအပြုသဘော SN / VTA MTR နှင့် hippocampus MTR နှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးဆက်နွယ်နေကြောင်းသော်လည်းမ MTR amygdala ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ဖို့ amygdala ၏ HR SN / VTA ဒါမှမဟုတ် hippocampus အတွက် MTR အတူ amygdala MTR သော်လည်းမဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ရလဒ်အသစ်အဆန်းများအတွက် SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက် hemodynamic activation ရွေးချယ်သောဤအဆောက်အဦများ၏အသက်အရွယ်-related ယိုယွင်းကြောင့်ထိခိုက်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ mesolimbic အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့တစ် hippocampal-SN / VTA ကွင်းဆက်၏ထောက်ခံမှုအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံ-function ကိုကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်။
dopamine အားဖြည့်သင်ယူမှုအတွက်ဒါပေမယ့်လည်း hippocampus-မှီခို Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးထဲမှာမသာအခန်းကဏ္ဍကြောင်းဆုံသက်သေအထောက်အထား (ရှိပါသည်Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်, dopamine (hippocampal ရေရှည်အလားအလာအားပေးအားမြှောက်Otmakhova နှင့် Lisman 1996; လီ et al ။ 2003; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) နှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ဧရိယာ CA1 နှင့်သင်ယူခြင်း hippocampus-မှီခိုတိုးတက်ကောင်းမွန် (Gasbarri et al ။ 1996; Bach et al ။ 1999; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ (ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့) dopaminergic အေးဂျင့်များ၏ Intrahippocampal လျှောက်လွှာ (ရေဝင်္တာဝန်များကိုအတွက် Spatial မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်Packard တို့ et al ။ 1994) ။ တိရိစ္ဆာန်များတစ်ဦးပိုင်းတွင်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ကို reexposed ကြသောအခါရွေးချယ် dopamine ၏ Intraventricular ထိုး D1 / D5 အဲဒီ receptor ရန် (ရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးအပြုအမူတစ်ခုချို့ယွင်းလေ့ဆီသို့ဦးတည်သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ လူသားမြားသညျမှာ dopaminergic စနစ်ရောဂါဗေဒကိုပြောင်းလဲမှတ်ဉာဏ်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ် (Backman et al ။ 2000).
Episode encoding ကအတွက် dopaminergic midbrain ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအဘို့အ functional ခန္ဓာဗေဒသက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွေ့ရှိချက်ကနေလာပါတယ်။ အဆိုပါ substantia nigra / ventral tegmental ဧရိယာ (SN / VTA) ၏ဆုလာဘ်-related activation, တိုးတက်လာသော hippocampus-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်စုစည်းပြီး (သည်အဘယ်မှာရှိ mesolimbic dopaminergic neuromodulation မူရင်းဒေသWittmann et al ။ 2005; Adcock et al ။ 2006) ။ encoding-related midbrain activation လည်း (လွတ်လပ်စွာဆုလာဘ်များဖြစ်ပေါ်Schott et al ။ 2006) ။ အဆိုပါ SN / VTA ၏ဤအလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှု dopaminergic neurotransmission မှဆက်စပ်ကြောင်းအဆိုပါခန္ဓာဗေဒအခြဒီဒေသအတွက် encoding က-related activation ပရိုဖိုင်းကိုပု dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွဲဖက်ထပ် polymorphic တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ variable ကိုအရေအတွက်အားဖြင့် modulated ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းမကြာသေးမီမျိုးဗီဇသက်သေအထောက်အထားများကခိုင်မာစေခဲ့သည် (DAT1) မျိုးဗီဇ (Schott et al ။ 2006).
ဒါဟာ (SN / VTA နှင့် hippocampus အကြား functional relationship လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်းမောင်းနှင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ တိရစ္ဆာန်များအတွက်ဆုလာဘ်-coding dopaminergic midbrain အာရုံခံလည်း (အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်နဲ့လှုံ့ဆော်မှုအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည့်အခါအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲ habituateSchultz 1998) ။ fMRI အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့မကြာသေးမီကလည်းလူ့ SN / VTA ထိုကဲ့သို့သောရှားပါး (သို့မဟုတ် Contextual deviance) အဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု salience ၏အခြားပုံစံများအနေဖြင့်, အသစ်အဆန်း stimulus တုံ့ပြန်မှုကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence လေ့လာတွေ့ရှိ, ဒါမှမဟုတ်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ပစ်မှတ် (ဒီထက်ထိရောက်များမှာBunzeck နှင့် Duzel 2006) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ (အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ hippocampal-SN / VTA ကွင်းဆက်အကြံပြုခြင်းမကြာသေးခင်ကမော်ဒယ်၏မျက်နှာသာနှင့် encoding ကအတွက်သက်သေအထောက်အထားပေးLisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ သူတို့ကသိသာဆုလာဘ်၏မရှိခြင်းအတွက်, ဒီကွင်းဆက်၏ activation မဟုတ်ဘဲလှုံ့ဆော်မှု salience ၏အခြားပုံစံများကိုထက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်းမောင်းနှင်ကြောင်းရှင်းလင်း။ အတူတူပင်ဆုလာဘ်များမရှိခြင်း (အောင်မြင် encoding ကမှ SN / VTA လှုပ်ရှားမှုဆက်သွယ်ထားသောဖျောပွသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူSchott et al ။ 2006) ဤတွေ့ရှိချက် hippocampal-SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အောင်မြင်သော Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအကြား link တစ်ခုအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Dopaminergic neurotransmission Episode မှတ်ဉာဏ်များအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံ။ လူ့သူသခှေဲစိတျခွငျးဒေတာ (dopamine D3 အတွက် 1% အသက်အရွယ်-related ကျဆင်းခြင်းညွှန်ပြSeeman et al ။ 1987; Cortes et al ။ 1989; Rinne et al ။ 1990) နှင့် D2 receptors (Seeman et al ။ 1987) ဆယ်စုနှစ်နှုန်း။ အဆိုပါ SN မှာနှစ်ဦးနှစ်ဖက် ventral တစျပိုငျးကိုအတွက် medial တစျပိုငျးကိုနှင့် 6% အတွက်ဆယ်စုနှစ်နှုန်း 2% ၏ dopaminergic အာရုံခံတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်း (ရှိFearnley နှင့် Lees 1991) ။ အဆိုပါ SN အတွက် antemortem fluorodopa positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့် postmortem အာရုံခံဆဲလ်အရေအတွက်၏တစ်ဦးဆက်စပ်မှုမှာအာရုံခံဆုံးရှုံးမှု (striatal dopamine ရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းမှတင်းကြပ်စွာအချိုးကျခဲ့သည်နှင်း et al ။ 1993) ။ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်, Episode မှတ်ဉာဏ်အတွက်လိုငွေပြမှုပိုကောင်း (အသက်အားဖြင့်ထက်စည်းနှောင် D2 အဲဒီ receptor ကတာဝန်ယူထားပါသည်Backman et al ။ 2000).
အဆိုပါ hippocampal-SN / VTA မော်ဒယ်အဟောင်းများလူကြီးများအတွက်အသစ်အဆန်းမှလူ့ SN / VTA နှင့် hippocampus ၏တုန့်ပြန်ပြင်းအားပူးတွဲ SN / VTA နှင့် hippocampus အတွင်းသမာဓိကဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, amygdala ကိုတိုက်ရိုက် (hippocampal-SN / VTA အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အထောက်အကူပြုတော်မမူကြောင်းပေးထားLisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005; Bunzeck နှင့် Duzel 2006), hippocampal မဟုတ်သလို SN / VTA အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုမ amygdala အတွင်းသမာဓိရှိဆက်နွယ်နေကြောင်းရပါမည်။ ကျနော်တို့ (ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်တူညီတဲ့အသစ်အဆန်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါ SN / VTA အတွက် hemodynamic တုံ့ပြန်မှု (နာရီ) ရူးနှမ်းကြောင်းပါရာဒိုင်းနှင့် hippocampus သုံးပြီးဒီယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်Bunzeck နှင့် Duzel 2006) ကျန်းမာအဟောင်းတွေအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးအုပ်စု။ အဆိုပါ SN / VTA, hippocampus များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သင်တန်းသားများ၏ amygdala သံလိုက်လွှဲပြောင်းပုံရိပ် (MTI) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည်။
တစ်ရှူးများတွင်သံလိုက်လွှဲပြောင်း (macromolecules ဖွငျ့ကွပွီးတဖြစ်ကြောင်းမိုဘိုင်းရေပရိုတွန်နှင့်ပရိုတွန်အကြားပရိုတွန်သံလိုက်၏လဲလှယ်ဖို့ပြောပြတယ်Wolff နှင့် Balaban 1989) ။ MTI အောင်မြင်ရန်, macromolecular ပရိုတွန်၏သံလိုက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစံပရိုတွန်သိပ်သည်းဆမာန်တင်းပုံရိပ်ကာလအတွင်းသင့်လျော်သော Off-ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု irradiation သုံးပြီးပြည့်နှက်နေသည်။ သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်ဝန်းကျင်ရှိအတွက်မိုဘိုင်းရေပရိုတွန်နှင့်အတူဤအတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြည့် macromolecular ပရိုတွန်၏အပြန်အလှန်ရုပ်တုဆင်းတုများတွင်လေ့လာရေ signal ကို attenuates ။ ဒါဟာအချက်ပြမှုလျှော့ချရေးထိုသို့သောအာရုံစူးစိုက်မှု, ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် / သို့မဟုတ် macromolecules ၏ဓာတုဗေဒအဖြစ်တစ်ရှူးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရေအကြောင်းအရာအပေါ်အဖြစ်ပုံရိပ် sequence ကို parameters တွေကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ (Magnetic လွှဲပြောင်း [MT]) နှင့် (မျှသံလိုက်လွှဲပြောင်း [noMT]) သံလိုက်လွှဲပြောင်းခြင်းမရှိဘဲ2ဆက်တိုက်တိုင်းတာဝယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, ဒါခေါ်သံလိုက်လွှဲပြောင်းအချိုး (MTR) voxel အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦး voxel အပေါ်တွက်ချက်နိုင်ပါတယ်အဆိုအရ: MTR = (noMT - MT) / noMT ။
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါတွင် MTR ၏ဟီပိုocampalလျှော့ချခြင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည် (Hanyu, Asano, Iwamoto, et al ။ 2000; Hanyu, Asano, Kogure et al ။ 2000) နှင့် Lewis ခန္ဓာကိုယ်နှောက်ထဲမှာအငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိ (Hanyu et al ။ 2005) ။ ဤအမှုကိစ္စများတွင် hippocampal MTR လျှော့ချအခြေခံကြောင်းအဆိုပါတိကျတဲ့ pathophysiology သေးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်မျိုးစုံနဗ်ကြောနှင့်အတူလူနာအတွက် MTR လျှော့ချအချို့သောသဲလွန်စပေး။ သူတို့ဟာ MTR အတွက်လျှော့ချပင်ကဲ့သို့သောအခြားအပုံရိပ်ပုံစံများလျှင်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်အကြံပြု T2- နှင့် T1-weighted ပုံရိပ်, အဖြူရောင်ကိစ္စအပါအဝင်သာမန်-ပေါ်ထွန်းတစ်ရှူးများ၏အစောပိုင်းမူမမှန်ဖော်ထုတ်မယ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်အထိခိုက်မခံအောင်မပါမူမမှန်ကိုပြသ (Iannucci et al ။ 2000; Traboulsee et al ။ 2002; Audoin et al ။ 2004; ဖာနန်ဒို et al ။ 2005) နှင့် cortical (ဖာနန်ဒို et al ။ 2005) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နက်ရှိုင်းသောမီးခိုးရောင်ကိစ္စ (Audoin et al ။ 2004) ။ ပုံမှန်-ပေါ်ထွန်းအဖြူရောင်အမှု၌ MTR လျှော့ချ (astrocytic ပြန့်ပွား, perivascular ရောင်ရမ်းခြင်း, demyelination ကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,Rademacher et al ။ 1999), နှင့် axon သိပ်သည်းဆဆုံးရှုံးမှု (ဗန် Waesberghe et al ။ 1999) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သွေးကြောကဲ့ရဲ့ (Fazekas et al ။ 2005) ။ ပုံမှန်-ပေါ်ထွန်းမီးခိုးရောင်အမှု၌ MTR လျှော့ချ (ကြောင့်တွေ့ရှိရပါသည် demyelinating afferent မှအလယ်တန်း transsynaptic morphological မူမမှန်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဤဖြစ်နိုင်ခြေမကြာသေးမီကအမြင်အာရုံ cortical MTR optic neuritis တစ်ခုအထီးကျန်အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်လျှော့ချသောတွေ့ရှိချက်များကထောက်ခံခဲ့သည်Audoin et al ။ 2006) ။ စိတ်ဝင်စားစရာအဲဒီလူနာလည်း MTR transsynaptic အာရုံခံယိုယွင်းခြင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်သီ afferent အဖြူကိစ္စကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်ပုံမှန်-ပေါ်ထွန်းမီးခိုးရောင်အမှု၌ cortical Synaptic morphological အပြောင်းအလဲများကို (မှအထိခိုက်မခံကြောင်းအကြံပြုသည်, hippocampus အတွက်သာလွန်ယာယီ gyrus, lenticular အရေးပါနှင့် cerebellum လျှော့ MTRs ခဲ့Audoin et al ။ 2006).
ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) နှင့်အတူလူနာများတွင် SN ၌ MTR လျှော့ချခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (Eckert et al ။ 2004; Seppi နှင့် Schocke 2005) ။ PD အတွက် SN MTR လျှော့ချရေးတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်။ PD dopaminergic တစ်ဦးရွေးချယ်ကွယ်ပျောက်သွားသည် SN (ပိုဒျ compacta အ) ၏ neuromelanin ပါဝင်သောအာရုံခံဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ Neuromelanin အဆိုပါ SN ဖို့အနက်ရောင်အရောင်ပေးအပ်သောမှောင်မိုက်ပျော် macromolecule ဖြစ်ပါတယ်။ အာရုံခံဆုံးရှုံးမှုအဖြစ် neuromelanin macromolecule ငြမ်း၏ပျက်စီးခြင်း (Fasano et al ။ 2006) MTR တစ်လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးယန္တရားများလည်း PD ၏လက်တွေ့ဆိုင်းဘုတ်များရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုပုံကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက် MTR အချို့လျှော့ချဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက် cortex ၏ MTR အသက်အရွယ်နှင့်အတူနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုကိုပြသလျက်, အသက်-related လျှော့ချရေး MTR မီးခိုးရောင်ကိစ္စအဆောက်အဦများ (ထဲမှာအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများမှအထိခိုက်မခံကြောင်းအကြံပြု, အဖြူရောင်အမှုကြောင်းထက်တန်ခိုးကြီးGe et al ။ 2002; Fazekas et al ။ 2005; Benedetti et al ။ 2006) ။ သို့သော်အိုမင်းအတွက် MTR နှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ဒေတာ, ဥပမာ (ရှားပါး Deary et al ။ 2006), နှင့် mesolimbic စနစ် MTR ၏အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများအပေါ်ရရှိနိုင်မပါဒေတာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရန်, ရှိပါတယ်။
နှစျဆယျ့တစျကျန်းမာ, ညာသန်လူကြီးများ (အသက်အပိုင်းအခြား: 55-77 နှစ်ပေါင်း; ယုတ် = 65.3 နှစ်ပေါင်း; စံသွေဖည် [SD က] 6.3 နှစ်ပေါင်း =; 11 အမျိုးသမီးနှင့် 10 အထီး) အတည်ပြုခဲ့သောအဆိုပါလေ့လာမှုအတွက်ပေးဆောင်ပါဝင်မှုများအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြ Magdeburg, ဂျာမနီ၏အော့တို-ဗွန်-Guericke တက္ကသိုလ်ဒေသခံကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှ။ Self-အစီရင်ခံစာအဆိုအရဘာသာရပ်များအဘယ်သူအားမျှ, အာရုံကြောစိတ်ရောဂါ, သို့မဟုတ်ဆေးဝါးမမှန်သို့မဟုတ်မည်သည့်လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၏သမိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များ [သည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများစီးပွားပျက်ကပ်စကေး (GDS မှာပုံမှန်အကွာအဝေးအတွင်းသွင်းယူYesavage ဂျေအေ et al ။ , 1982]; GDS = 1.4, SD က = 1.1 ဆိုလို; အားလုံးဘာသာရပ်များအဘို့အ4≤ GDS; GDS 0-15 ကနေလာနေကြပါတယ်; 11 စိတ်ကျရောဂါညွှန်ပြထက်ပိုမိုမြင့်မားများ၏ရမှတ်များ) နှင့် Mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲ (MMSE [Folstein ME et al ။ , 1983]; MMSE = 29.5, SD က = 0.75 ဆိုလို; အားလုံးဘာသာရပ်များအဘို့အ MMSE ≥ 28; MMSE 0-30 ကနေလာနေကြပါတယ်; 25 ရောဂါဗေဒထက်နိမ့်များ၏ရမှတ်များ) ။ ထို့ပြင်အားလုံးဘာသာရပ်များပုံမှန်သွေးပေါင်ချိန်ခဲ့, သူတို့အဘယ်သူအားမျှအဝလွန်ခဲ့ (ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း = 27.1, SD က = 5.1 ဆိုလို) ။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည် Self-အစီရင်ခံစာများ, မေးခွန်းနှင့်ဆေးဝါးစာမေးပွဲအသက်အရွယ်သင့်လျော်သောကျန်းမာရေးဖော်ပြသည်။ MTR အတွက်အသက်အရွယ်-related လျှော့ချရေးလည်းမရှိရှိမရှိအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ 24 ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (:; ယုတ် = 21 နှစ်ပေါင်း; SD က = 30 နှစ်ပေါင်း; 23.25 အမျိုးသမီးနှင့် 2.21 အထီး 16-8 နှစ်ပေါင်းအသက်အပိုင်းအခြား) မှခန္ဓာဗေဒ MRI ဒေတာပါဝင်သည်။ ထိုလူငယ်လူကြီးများအဘယ်သူအားမျှ, အာရုံကြောစိတ်ရောဂါ, သို့မဟုတ်ဆေးဝါးမမှန်သို့မဟုတ်မည်သည့်လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၏သမိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါအဟောင်းတွေဘာသာရပ်များအစီရင်ခံတဲ့ပြုပြင်ထားသောအမြင်အာရုံ oddball ပါရာဒိုင်း၏ 8 လုပ်ကွက်ပြီးစီး Bunzeck နှင့် Duzel (2006)။ တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုခုနှစ်, 80 စံချိန်စံညွှန်းများ, 10 ပစ်မှတ် oddballs, 10 ကြားနေ oddballs, 10 စိတ်ခံစားမှု oddballs နှင့် 10 ဝတ္ထု oddballs (တစ်ခုလုံးကိုစမ်းသပ်မှုအတွက် oddball လူတန်းစားနှုန်း 80 လှုံ့ဆော်မှုစုစုပေါင်းအလျှော့ပေးလိုက်လျော, ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1A) ။ အမျိုးအစား-တိကျတဲ့လေ့ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်များအစဉ်အဆက်အဘို့အခွင့်ပြုရန်, ငါတို့အဲဒီ session နှင့် (ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced) အခွားဝက်အတွင်းပြင်ပမြင်ကွင်းများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံများထဲမှတစ်ဝက်တွင်အထီးမျက်နှာများ၏ရုပ်ပုံများကိုပေးအပ်သည်။ ကျနော်တို့လှုံ့ဆော်မှုတူးဖော်ရေးဇီဝသက်ဆိုင်ရာစေဤအမျိုးအစားအစားစိတ္တဇပုံရိပ်တွေကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုကြိုတင် 4.5 s အတွက်စမ်းသပ် session ကိုမှတင်ပြခဲ့ပါသည်နှင့်ဘာသာရပ်များသူတို့ဘက်၌တရားလက်ညှိုးသုံးပြီးစမ်းသပ်မှုအတွက်၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲအသွင်အပြင်၏တစ်ဦးချင်းစီမှတစ်ဦးရိုးရှင်းသော button ကိုစာနယ်ဇင်းစေရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်သူမျှမမော်တာတုံ့ပြန်မှုအခြားစီးပွားရေးနှိုးဆွအတန်းမဆိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုစဉ်အတွင်းပုံ 500 s ကိုတစ်ဦး interstimulus ကြားကာလ (ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI) ကို အသုံးပြု. မီးခိုးရောင်နောက်ခံ (မီးခိုးရောင်တန်ဖိုးကို = 127) အပေါ်တစ်ဦးအဖြူ fixation လက်ဝါးကပ်တိုင်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 2.7 ms များအတွက်တင်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI -300 နှင့် + 300 ms (တစ်ပုံစံတည်းဖြန့်ဝေ) တို့အကြား jittered ခဲ့သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများ၏အမိန့်လှုံ့ဆော်မှု-related နာရီခန့်မှန်းပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူထိရောက်မှုတို့အတွက် optimized ခဲ့သည် (Hinrichs et al ။ 2000).
လှုံ့ဆော်မှု, စမ်းသပ်ဒီဇိုင်း (A), နှင့် fMRI အချပ်ဝယ်ယူ (B) ။ တစ်ဦး oddball ပါရာဒိုင်းတှငျကြှနျုပျတို့နံပါတ်များကို (% အတွက်) ဖြစ်ပျက်မှု၏ကြိမ်နှုန်းဖျောညှနျးစံလှုံ့ဆော်မှု, ပစ်မှတ် oddballs, ကြားနေ oddballs, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs နှင့်ဝတ္ထုပု oddballs-ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများထဲမှတစ်ဝက်ငါတို့သည်အထီးမျက်နှာများ၏ဓာတ်ပုံများကိုတင်ပြခြင်းနှင့်အခြားတစ်ဝက်ပြင်ပမြင်ကွင်းများဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမိန့်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး counterbalanced ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ fMRI အသံအတိုးအကျယ်အဘို့, 24 ချပ်ဟာ SN / VTA, hippocampus ဖုံး midbrain ဖို့အပြိုင်, amygdala, အ cerebellum ၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့် prefrontal cortex (ဝယ်ယူခဲ့သည်B).
အားလုံးလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် Bunzeck နှင့် Duzel (2006)။ မျက်နှာများများ၏ဦးရေပြားဆံပင်နှင့်နားရွက်သူတွေဟာဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်, နှင့်ပြင်ပမြင်ကွင်းများမျက်နှာများမပါဝင်ခဲ့ချေ။ အားလုံးဓါတ်ပုံတွေကိုပြခဲ့သည်ဆို၏မီးခိုးရောင်နှင့် 127 တစ်အတောအတွင်းမီးခိုးရောင်တန်ဖိုးနှင့် 75 တစ်ခု SD ကမှပုံမှန်ရှိကြ၏။ အဆိုပါဓာတ်ပုံများကိုမျက်နှာပြင်၏ဗဟိုပေါ်သို့စီမံကိန်းနှင့်သင်တန်းသားများနှင့်ပတ်သက်ပြီး 8 °တစ်အမြင်အာရုံထောင့် subtending, ဦးခေါင်းကွိုင်အပေါ်တပ်ဆင်ထားမှန်အားဖြင့်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဓာတ်ပုံများကိုကွဲပြားခြားနားသောသတင်းရင်းမြစ်များမှ (ကြားနေမျက်နှာများခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်: "ဒီစိတ်ဓာတ်ပုံရိပ်ငွေကောက်ခံ Stirling မှာ," http://pics.psych.stir.ac.uk/; အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာ: [Ekman နှင့် Friesen 1976]; နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုမြင်ကွင်းတစ်ခု: နိုင်ငံတကာကိုထိခိုက်ရုပ်ပုံ system ကို [lang et al ။ 2001]) ။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းတစ်ခုရုပ်ပုံလွှာ (မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များမပါဘဲ) တစ်ဦးအဆိုး rated ကားတစ်စီးမတော်တဆမှုပုံဖော်။ ပစ်မှတ်ထောက်လှမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ထိခိုက်နှုန်း (ပစ်မှတ်မှမှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု) နှင့်မှားယွင်းသောနှိုးဆော်သံနှုန်း (nontarget ဓါတ်ပုံတွေကိုမှတုံ့ပြန်မှု) ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ Bunzeck နှင့် Duzel (2006), fMRI တစ်ခု 3-ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်သုံးပြီးပဲ့တင်သံပြိုပုံရိပ် (EPI) နဲ့တစ်ဦး 8-တက်စလာတပြင်လုံးကို-ခန္ဓာကိုယ် MRI စနစ် (Siemens Magnetom Trió, Erlangen, ဂျာမနီ) ရက်နေ့တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သိမ်းယူမှု protocol ကိုနှင့်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌ရှိသကဲ့သို့ခဲ့ကြသည် Bunzeck နှင့် Duzel (2006)။ ချပ်တစ်ခုထူးဆန်း-ပင်ကြားညှပ်ဦးတည်ချက်အတွက် brainstem ဖို့အပြိုင်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ် session တစ်ခုမှာတော့ 24 T264 × 64 မီလီမီတာ; Spatial resolution ကို: 24 × 192;; အသံအတိုးအကျယ်နှုန်း 192 ချပ်ရှုထောလယ်ကွင်း [FoV]3× 3: * အသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခိုဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူအသံအတိုးအကျယ်နှုန်း -weighted ပုံရိပ်တွေ (EPI sequence ကို) (matrix ကိုအရွယ်အစားရယူခဲ့ကြသည် ×3မီလီမီတာ; ကွာဟမှု = 0.3 မီလီမီတာ; အချိန် [TE] = 30 ms echo; အချိန်အထပ်ထပ် [TR] = 1500 ms; နှင့်လှန်ထောင့် = 75 °) ။ ဤရွေ့ကားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း volumes ကိုပု hippocampus, amygdala, နှင့် (diencephalon, mesencephalon, pons နှင့် medulla oblongata အပါအဝင်) brainstem ဖုံးလွှမ်းနှင့် prefrontal cortex နဲ့ cerebellum ၏အစိတ်အပိုင်းများကို (သဖန်းသီး။ 1B) ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်၊ အချက်အလက်များကို session တစ်ခုအတွက် volumes ၄၄၀ ပါသော4scan ဖတ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအချက်အလက်များကိုရရှိခဲ့သည်။ session တစ်ခုစီအတွက်နောက်ထပ် volumes ခြောက်ခုကို functional session တစ်ခုစီ၏အစတွင်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်တည်ငြိမ်သော magnetization ကိုခွင့်ပြုရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှစွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး၏ရုပ်ပုံများကိုကောက်ယူခဲ့သည် T1-weighted ပြောင်းပြန်လှန်ပြန်လည်နာလန်ထူ-ပြင်ဆင်ထား EPI (IR-EPI) ပာ (matrix ကိုအရွယ်အစား: 64 × 64; 60 ချပ်; FoV: 192 × 192 မီလီမီတာ; Spatial resolution ကို:3×3×3မီလီမီတာ; ကွာဟမှု = 0.3 မီလီမီတာ; TE = 33 ms ; TI = 1450 ms; နှင့် TR = 15000 ms) ။
ထိုလူငယ်နှင့်အထက်လူကြီးများ, တစ်ဦးနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ T1အလေးချိန် - ခန္ဓာဗေဒပုံ (3D ပျက်စီးသည့် gradient-echo sequence; matrix size: 256 × 256; 124 slices; FoV: 250 × 250 mm; Spatial resolution 0.98 × 0.98 × 1.5 mm; TE = 8 ms; TR = 24 ms) နှင့်လှန် ထောင့် = 30 °) နှင့်2ပရိုတွန်သိပ်သည်းဆ - အလေးချိန်ပုံရိပ်တွေ (လှည့်ကွက် - ပဲ့တင်သံ sequence ကို; matrix ကိုအရွယ်အစား: 256 × 256; 48 ချပ်; FoV: 250 × 250 မီလီမီတာ; Spatial resolution ကို: 0.98 × 0.98 ×3မီလီမီတာ; TE = 20 ms; နှင့် TR = 2600 ms) ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ပရိုတွန်သိပ်သည်းဆ - အလေးချိန်ရှိသောပုံရိပ်တစ်ခုသည်ပြင်ဆင်နေသောရွှဲရွှဲမှုနှုန်း (1200 Hz off-resonance, 16 ms) ဖြင့် MT ပုံရိပ်ရရှိခဲ့သည်။သဖန်းသီး။ 2A) နှင့်တဦးတည်း (က noMT ပုံရိပ်ထဲမှာရရှိလာတဲ့တစ်ဦးပြင်ဆင်နေရွှဲသွေးခုန်နှုန်းခြင်းမရှိဘဲဝယ်ယူခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2B) ။ နောက်ပိုင်းတွင်စီဘာသာရပ်များအတွက် MTR မြေပုံ (သဖန်းသီး။ 2CMT) / noMT - MTR = (noMT:) အောက်ပါညီမျှခြင်းအရသိရသည်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ SN / VTA နှင့်အနီရောင်နျူကလိယ၏မှတ်ပုံတင်တိုးတက်စေရန်, ရှိသမျှ 21 အဟောင်းတွေဘာသာရပ်များ၏ MT ပုံရိပ်တွေ SPM99 အားဖြင့်ထောက်ပံ့စံ Montreal အာရုံကြောသိပ္ပံ (MNI) template ကိုမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်နှင့်အဟောင်းများကိုတစ်ဦး MT template ကိုဖန်တီးရန်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ ဘာသာရပ်များအုပ်စုသည် (သဖန်းသီး။ 2D) ။ အဆိုပါ SN / VTA ဒေသတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောအစင်းအဖြစ် MT ပုံရိပ်တွေအပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံပတျဝနျးကငျြကနေအလွယ်တကူပုံမှန်နိုင်ပါတယ်စဉ်အခါ, ကပ်လျက်အနီရောင်နျူကလိယ (မှောင်မိုက်ပုံပေါ်သဖန်းသီး။ 2A,D) ။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ T1-weighted ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်နှင့်ပရိုတွန်သိပ်သည်းဆမာန်တင်းပုံရိပ်တွေဟာ 1.5-တက်စလာတပြင်လုံးကို-ခန္ဓာကိုယ် MRI စနစ် (Signa Horizon LX, General Electric, Waukesha, WI) သုံးပြီးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနေခဲ့ကြသည်။
ခန္ဓာဗေဒ MR ပုံရိပ်တွေ။ တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်2ပရိုတွန်သိပ်သည်းဆပုံရိပ်တွေဝယ်ယူခဲ့ကြသည်: တစ်ခု MT ပုံရိပ် (ထဲမှာရရှိလာတဲ့တစ်ဦးပြင်ဆင်နေရွှဲသွေးခုန်နှုန်းနှင့်တသားတပရိုတွန်သိပ်သည်းဆပုံရိပ်A) နှင့်တစ်ဦး noMT ပုံရိပ်ထဲမှာရရှိလာတဲ့တစ်ဦးပြင်ဆင်နေရွှဲသွေးခုန်နှုန်းခြင်းမရှိဘဲတစ်စက္ကန့်ပရိုတွန်သိပ်သည်းဆပုံရိပ် (B) ။ ရုပ်ပုံနှစ်ခုလုံးကိုဘာသာရပ်၏ MTR ပုံရိပ်ကိုတွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။Cဘာသာရပ်များ၏ SN / VTA, hippocampus နှင့် amygdala များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသမာဓိကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သော) (ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ A ားလုံး၏ပုံမှန် MT ပုံရိပ်များကိုပျမ်းမျှအားဖြင့် A ုပ်စု၏ MT ပုံစံကိုရရှိခဲ့သည် (D), အရာ SN / VTA အတွင်း Active သတ်မှတ်ပြီးဆက်လက်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည် () အစိမ်းရောင်ဝိုင်းရံများနှင့်အနီရောင်ဝိုင်းရံအနီရောင်နျူကလိယ () ။
အဆိုပါ fMRI ဒေတာ preprocessed နှင့်ကစာရင်းအင်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည် Bunzeck နှင့် Duzel (2006) (အထွေထွေ linear မော်ဒယ်ချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်Friston et al ။ 1994) SPM99 software ကိုအထုပ်သိမှု Neurology, တက္ကသိုလ်ကောလိပ်, လန်ဒန်, ဗြိတိန်) နှင့် MATLAB ကို 6.1 (အဆိုပါ MathWorks, Inc, Natick, MA) ၏ (အဆိုပါ Wellcome ဦးစီးဌာနကိုသုံးနိုင်သည်။ အားလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပထမဦးဆုံးအသံအတိုးအကျယ်မှရှိမယ်ခြင်းဖြင့်ရွေ့လျားမှုအပိုငျးအဘို့အတညျ့ခြိနျတှငျဝယ်ယူအလယ်မှာအချပ်မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူထူးဆန်း-ပင်အချပ်ပြင်းထန်မှုကွဲပြားမှုအဘို့အတညျ့နှင့်တစ်ဦးစံဖို့ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည် T1-weighted စာရင်းဇယား parametric မြေပုံ (SPM) template ကို (Ashburner နှင့် Friston 1999) ။ ပုံမှန်စံသတ်မှတ်ချက်အရဘာသာရပ်၏ခန္ဓာဗေဒ IR-EPI ကို SPM template သို့ဖြည့်ပြီး၎င်း parameters များကိုအလုပ်လုပ်သောပုံများအားအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ပုံများကို2×2×2mm သို့ resampled 4-mm full-width half-maximum Gaussian kernel ဖြင့်ချောမွေ့အောင်လုပ်ထားတယ်။ အချိန်စီးရီး fMRI အချက်အလက်များကို highpass filtered (cut-off 120 s) နှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအတွင်း voxels နှင့် Scan ဖတ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်တစ်ခုစီအတွက်စာရင်းအင်းပုံစံကို canonical response function နှင့်၎င်း၏ယာယီအနကျအဓိပ်ပါယျကိုအသုံးပွုခွငျးအားဖွငျ့အသုံးပွုခဲ့သညျ။Friston et al ။ 1998) ။ ကျန်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှု-related အပိုငျးအကိုဖမ်းယူဖို့, session တစ်ခုနှုန်း6covariates (ထို3တင်းကျပ်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာနှင့်ကနဦးရှိမယ်, ကနေဆုံးဖြတ်ထား3လည့်) ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဒေသတွင်းတိကျတဲ့အခွအေနေသက်ရောက်မှုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက် linear ထူးခွားသညျ့နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအလုပ်သမားများကစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ရရှိလာတဲ့ဆနျ့ကငျြဘပုံရိပ်တွေဒုတိယအဆင့်ကျပန်းသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ ဒီနေရာမှာတနမူနာ tဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏အသံအတိုးအကျယ်အစုနှင့်ကွဲပြားသောအခြေအနေများအတွက်ရရှိသောရုပ်ပုံများကိုစမ်းသပ်ခြင်းများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး စားပေးယူဆချက်များအရ၊ P <0.005 (မမှန်မကန်) နှင့် k =3voxel ။ SN / VTA နှင့်အနီရောင်နျူကလိယတုံ့ပြန်မှု၏ခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခြင်းအတည်ပြုရန်ရန်, activation မြေပုံအဆိုပါ MT template ကိုအပေါ် superimposed ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ midbrain ပြင်ပသိသိသာသာ Active ၏ခန္ဓာဗေဒမူပြောင်းခြင်း SPM99 ပေးမယ့်စံဦးနှောက် template ကို (MNI) ရက်တွင် SPM မြေပုံ၏ superimposition အားဖြင့်စံ stereotaxic Atlas မှရည်ညွှန်းနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ် mesolimbic စနစ်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုများ၏သက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့, hippocampus နှင့် amygdala တစ်ဦးချင်းစီကို အသုံးပြု. အကျိုးစီးပွား (Roi) ၏ဒေသများအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် T1ပုံရိပ်တွေ -weighted, နှင့် SN / VTA ရွယ်တစ်ဦးချင်းစီ MT image ကို အသုံးပြု. သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါ ROIs တစ်ဦးချင်းစီ MTR image ကိုလွှဲပြောင်းနှငျ့ (voxels ကိုဖြတ်ပြီး) ကိုဆိုလိုတန်ဖိုးကိုတစ်ဦးချင်းစီရွယ်၏ခဲ့ SN / VTA MTR အတွက် MTR hippocampus နှင့် MTR amygdala ရရှိလာတဲ့ထုတ်ယူခဲ့သည်။ ဒုတိယအဆင့်ရိုးရှင်းသောဆုတ်ယုတ်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးခုနှစ်, MTR hippocampus နှင့် MTR amygdala SN / VTA MTR, အကျိုးစီးပွားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ဥပမာ, ဝတ္ထု oddballs vs. ကြားနေ oddballs) အတွက် regressors အဖြစ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့ကြသည်။
မဟုတ်မမှန်ပစ်မှတ်အဖြစ်တုန့်ပြန်ခဲ့ကြအပြုအမူ, ရှိသမျှပစ်မှတ်၏ 92.1% (SD က = 2.1) 558 ms (SD က = 68) ၏ယုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူတွေ့ရှိအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, အခြားအနှိုးဆွအတန်းကသာ 2.32% (SD က = 2.1) ခံခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးပထမဦးဆုံး fMRI-data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, midbrain အတွင်းနာရီအကျိုးစီးပွား၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်း parametric မြေပုံအဆိုပါ midbrain အတွင်းမှာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်း (ဝတ္ထု oddballs vs. ကြားနေ oddballs) ညာဘက် SN / VTA အတွက်ထင်ရှားတဲ့တုံ့ပြန်မှု (ရူးနှမ်းကြောင်းပြသသဖန်းသီး။ 3A-C, နောက်ဆက်တွဲဇယား S1A) ဒါပေမယ့်ရှားပါးစံချိန်စံညွှန်းများ vs. နှုန်း se (ကြားနေ oddballs) နှင့်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence (အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs vs. ကြားနေ oddballs) မဟုတ်ပြုလေ၏။ ၏စာရင်းအင်းခုံမှာ P = 0.005 (uncorrected) Target (ပစ်မှတ် oddballs vs. ကြားနေ oddballs) နှစ်နိုင်ငံ SN / VTA နှင့်နှစ်နိုင်ငံအနီနျူကလိယအပါအဝင်တစ်ခုလုံးကို midbrain ဖြတ်ပြီးတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်တစ်ခုံမှာ P = 0.05 (တညျ့), ကိုသာကျန်ရစ်အနီရောင်နျူကလိယ (သဖန်းသီး။ 3H) activation (နောက်ဆက်တွဲဇယား S1D) ဖော်ပြခဲ့တယ်။
FMRI activation ပုံစံများ။ အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့ (ဝတ္ထု oddballs vs. ကြားနေ oddballs) (SN / VTA အတွက် activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်A-C), hippocampus နှင့် parahippocampal cortex (: D, E,) ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence (ကြားနေ oddballs vs. အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs) ညာဘက် amygdala activated (F) နှင့်ရှားပါး (စံချိန်စံညွှန်းများ vs. ကြားနေ oddballs) (ပု hippocampus activatedG) ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence နှင့်ရှားပါးနှစ်ဦးစလုံးဟာ SN / VTA ကိုသက်ဝင်ခဲ့ပါဘူး။ Target (ပစ်မှတ် oddballs vs. ကြားနေ oddballs) (လက်ဝဲအနီနျူကလိယ activatedH) ။ activation မြေပုံ (တစ်ခု MT template ကိုအပေါ် superimposed ခဲ့ကြသည်A, B, C ကနှင့် H) (ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုကြည့်ပါ) နှင့်အပေါ် T1(မှာရှိတဲ့စံ MNI ဦးနှောက် -weighted: D, E နဲ့, F ကိုနှင့် G) ။ activation မြေပုံမှာ thresholded ခဲ့ကြသည် P ကနေလွဲပြီး = 0.005 (uncorrected) (H) Active မှာ thresholded ခဲ့ကြသည်ခဲ့ကြသည် P = 0.05 (တညျ့) ။
အဆိုပါ Scan အသံအတိုးအကျယ်၏ကျန်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုအသစ်အဆန်းကို (hippocampus အတွက်ခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3D,E) နှင့် parahippocampal cortex (သဖန်းသီး။ 3D နှင့်နောက်ဆက်တွဲဇယား S1A) ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence (ကြားနေ oddballs vs. အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs) (လက်ျာဘက် amygdala အတွက် activation ရူးနှမ်းသဖန်းသီး။ 3Fစံချိန်စံညွှန်းများ vs. နှင့်နောက်ဆက်တွဲဇယား S1B), ရှားပါး (ကြားနေ oddballs) လက်ဝဲ hippocampus activated (သဖန်းသီး။ 3G) နှင့်နှစ်နိုင်ငံ parahippocampal cortex (နောက်ဆက်တွဲဇယား S1C), နှင့်ပစ်မှတ်နှစ်ခုလုံး hippocampi အပါအဝင် scan ဖတ်တစိတ်တပိုင်းအသံအတိုးအကျယ်ဒေသအများအပြားတွင် activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, (တစ်ဦးထက်ပိုရှေးရိုးစွဲခုံမှာP = 0.05, တညျ့), ပစ်မှတ်များအတွက် activation ပုံစံညာဘက် cerebellum, လက်ဝဲ thalamus, နှစ်နိုင်ငံယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex နှစ်နိုင်ငံ Basal ganglia နှစ်နိုင်ငံ insula, ညာ cingulate gyrus နှင့် postcentral gyrus (နောက်ဆက်တွဲဇယား S1D) left ဖို့ကန့်သတ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသစ်အဆန်း, ရှားပါးနှင့်ပစ်မှတ်ပေမယ့်အနုတ်လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence အဆိုပါ prefrontal cortex (နောက်ဆက်တွဲဇယား S1) အတွင်းတော်တော်များများဒေသများ activated ။
သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးအုပ်စုအတွင်းရှိဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (အစီရင်ခံမှုအားလုံးသည် SN / VTA MTR၊ hippocampus MTR, amygdala MTR နှင့်အသက်အရွယ်အကြား SN / VTA MTR နှင့် hippocampus) အကြားအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်နှင့်အတူ (အစီရင်ခံမှုအားလုံးသည် Pearson ၏နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုဖြစ်သည်) MTR (r = 0.542, P = 0.011) ပေမယ့်မဆိုအခြား variable တွေကို (အကြားမရှိ, ဆက်စပ်မှုစားပွဲတင် 1) ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများအပေါ်ထပ်မံအကဲဖြတ်ရန် SN / VTA MTR နှင့် hippocampus MTR တို့ကိုအသက် ၂၄ နှစ်နှင့် ၂၁ နှစ်အရွယ်ရှိလူကြီးများကိုလွတ်လပ်သောနမူနာတစ်ခုဖြင့် သုံး၍ နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ T-test ။ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက် SN / VTA MTR တစ်သိသိသာသာလျှော့ချရေးလွတ်လပ်ခွင့် (Two-Tails, ဒီဂရီ [DF] = 43 ရှိ၏ P = 0.008, T = 2.8), သာလမ်းကြောင်းသစ် (Two-Tails, DF = 43 ရှိ၏စဉ် P = 0.17, T hippocampus MTR လျှော့ချရေးတို့အတွက် = 1.4) (သဖန်းသီး။ 4).
ငယ်ရွယ်နှင့်အထက်လူကြီးများအကြား MTR နှိုင်းယှဉ်။ အဆိုပါ SN / VTA MTR ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (Two-Tails နှိုင်းယှဉ်၏လူဦးရေအတွက်သိသာစွာပိုမိုမြင့်မားခဲ့ပေမယ့် P = 0.008, T = 2.8) (ကြယ်ခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြ), အ hippocampi MTR နှစ်ဦးစလုံးလူဦးရေအကြားသိသိသာသာကွာခြားပေမယ့်နုပျိုလူကြီးများ (Two-Tails နှိုင်းယှဉ်၏နမူနာအတွက်မြင့်မားလာသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ P = 0.17, T = 1.4) ။ မှားယွင်းနေသည်အရက်ဆိုင်ယုတ်၏စံအမှားဖော်ပြသည်။
SN / VTA MTR, hippocampus MTR, MTR amygdala နှင့်အသက်အရွယ်အကြားဆက်စပ်မှုဘို့ကိန်း (Pearson ဆက်စပ်မှု)
အဆိုပါ MTR-နှင့်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အသက်အရွယ်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်သမာဓိအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦးများအကြားဆက်ဆံရေးကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်ရိုးရှင်းဆုတ်ယုတ်သည့် regressors SN သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့ကြ ( 'ဝတ္ထု oddballs vs. ကြားနေ oddballs') အတွက်အသစ်အဆန်း-ဆနျ့ကငျြဘအဘို့အလေ့လာဆန်းစစ် / MTR နှင့်အသက်အရွယ် amygdala VTA MTR, hippocampus MTR ။ SPMs အဆိုပါ SN / VTA MTR အဆိုပါ SN / VTA (ထဲမှာအသစ်အဆန်း HR နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းထင်ရှားသဖန်းသီး။ 5A) နှင့်လက်ျာ hippocampus (နောက်ဆက်တွဲဇယား S2A), အ hippocampus MTR (လက်ျာဘက် hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်း HR နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းသဖန်းသီး။ 5F နှင့်နောက်ဆက်တွဲဇယား S2B), နှင့်အသက်အရွယ်အဆိုးညာဘက် hippocampus (နောက်ဆက်တွဲဇယား S2C) အတွက်အသစ်အဆန်း HR ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါ hippocampus သို့မဟုတ် SN / VTA (နောက်ဆက်တွဲဇယား S2D) တစ်ခုခုကိုအတွက် amygdala MTR နှင့်အသစ်အဆန်း HR အကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
အသစ်အဆန်း-related နာရီနှင့် MTRs အကြားဆက်စပ်မှု။ SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်း HR (A) SN / VTA MTR (နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းB) နှင့် hippocampus MTR (C) သော်လည်းမအသက် (D) သို့မဟုတ် MTR amygdala (E) ။ (ထို hippocampus အတွက်F), အသစ်အဆန်း HR (SN / VTA MTR နှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းG), hippocampus MTR (H) နှင့်အဆိုးအသက်အရွယ်နှင့်အတူ (I) သော်လည်းမ amygdala MTR (နဲ့အတူJ) ။ activation မြေပုံ (အုပ်စု MT template ကိုအပေါ် superimposed ခဲ့ကြသည်A) သို့မဟုတ် T1(စံ MNI ဦးနှောက် -weightedF) နှင့်အချိန် thresholded P = 0.005 (uncorrected) ။ ခရေပွင့မှာသိသိသာသာဆက်စပ်ညွှန်ပြ *P = 0.05 သို့မဟုတ် **P = 0.01-NS ( "သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်" abbreviatesP > 0.05) ။
အဆိုပါ SN / VTA (ထဲတွင်အထွတ်အထိပ် voxel ၏တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲသဖန်းသီး။ 5A()x, y, z အသစ်အဆန်း HR နှင့် SN / VTA MTR နှင့် hippocampus အတွက်အထွတ်အထိပ် voxel (အကြားဆက်စပ်မှုပြကြောင်း = 0, -14, -12)သဖန်းသီး။ 5Fအသစ်အဆန်း HR နှင့် MTR ထို့နောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ hippocampus အကြားဆက်စပ်မှုပြကြောင်း) (10, -2, 24) ။ အဆိုပါ SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်း HR (ထို SN / VTA MTR နှင့်အတူမသာအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းသဖန်းသီး။ 5B) ဒါပေမယ့်လည်း hippocampus MTR နှင့်အတူ (သဖန်းသီး။ 5C), အသက်အရွယ်နှင့်မဆက်စပ်ဖေါ်ပြခြင်းနေစဉ် (သဖန်းသီး။ 5D) သို့မဟုတ် MTR amygdala (သဖန်းသီး။ 5E) ။ လက်ျာ hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်း HR (သဖန်းသီး။ 5F) (hippocampus MTR နှင့်အတူမသာအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းသဖန်းသီး။ 5H) ဒါပေမယ့်လည်း SN / VTA MTR (နဲ့အတူသဖန်းသီး။ 5G), အသက်အရွယ်နှင့်အတူနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုဖေါ်ပြခြင်းနေစဉ် (သဖန်းသီး။ 5Iအဆိုပါ amygdala MTR နှင့်အတူ), နှင့်မျှမတို့ဆက်စပ်မှု (သဖန်းသီး။ 5J) ။ ထို့အပွငျ hippocampus HR နှင့် SN / VTA HR အသစ်အဆန်း (အပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းမှr = 0.375, P = 0.047, One-Tails), ဒါပေမယ့်အသစ်အဆန်းဖို့အသစ်အဆန်းဖို့ amygdala HR အကြားမျှဆက်စပ်မှုနှင့် SN / VTA HR သို့မဟုတ် hippocampus HR (နှစ်ဦးစလုံးရှိ၏ P > 0.39) ။ အသက်အရွယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်း variable အဖြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ SN / VTA ရှိအသစ်သော HR နှင့် SN / VTA MTR အကြားဆက်နွယ်မှုကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသုံးပြုခြင်း။r = 0.62, P = 0.004), SN / VTA နှင့် hippocampus MTR အတွက်အသစ်အဆန်း HR (r = 0.48, P = 0.03), အ hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်း HR နှင့် SN / VTA MTR (r = 0.43, P အဆိုပါ hippocampus နှင့် hippocampus MTR အတွက် = 0.055), နှင့်အသစ်အဆန်း HR (r = 0.63, P = 0.003) သိသာထင်ရှားသောကျန်ရစ်သို့မဟုတ်အရေးပါမှုအဆင့် (hippocampus နှင့် SN / VTA MTR အတွက်အသစ်အဆန်း HR) ချဉ်းကပ်။
အဆိုပါ SN / VTA MTR မ hippocampal MTR မကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်နဲ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်အဖြစ် SN / VTA MTR နှင့် hippocampal MTR အကြားအဆိုပါဖွဲ့စည်းပုံမှာ-function ကိုကြားဆက်ဆံရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသက်အရွယ်-related မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ်အဖြူကိစ္စလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးမျှသာရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်မဖြစ်နိုင်သို့မဟုတ် အသက်ကြီးလူကြီးများ (အပေါင်းတို့၏အဖြူရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် P တန်ဖိုးများ> 0.3) ။ တစ် ဦး ချင်းစီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကိစ္စ volumes ကိုဘာသာရပ်ရဲ့အပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ယူခဲ့သည် T1စံ SPM ဦးနှောက် segment algorithms သုံးပြီး -weighted ပုံရိပ် (Ashburner နှင့် Friston 2000).
အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs များအတွက် amygdala အတွက် HR ၏ဝိသေသလက္ခဏာများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ဖို့အတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဆုတ်ယုတ် regressors ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဆနျ့ကငျြဘ "အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ oddballs vs. ကြားနေ oddballs" ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော MTRs နှင့်အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။ ဤအ SPM ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းမ 0.005 (uncorrected) ၏အရေးပါမှုကိုအဆင့်မှာသိသိသာသာဆက်စပ်ထင်ရှား။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ဘို့လက်ျာ amygdala အတွင်းအထွတ်အထိပ် voxel ၏ HR ၏သို့သော်တစ်ဦးပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲ (x, y, z = 28, 0, -22; အရေးပါမှုတစ်ဦးတည်း-Tails အဆင့် (မှာနှစ်ဦးစလုံး variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုထင်ရှားနောက်ဆက်တွဲဇယား S1B ကိုကြည့်ပါ) နှင့် MTR amygdala လက်ျာr = 0.376, P = 0.046, One-Tails) ။ ဆနျ့ကငျြ, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ဤအထွတ်အထိပ် voxel အတွက် HR အားလုံး (SN / VTA MTR, hippocampus MTR, ဒါမှမဟုတ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူမပတျသကျဘူး P > 0.34) ။
ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများ (၌အကြှနျုပျတို့၏မကြာသေးမီလေ့လာတွေ့ရှိချက်မတူဘဲBunzeck နှင့် Duzel 2006), ထောက်လှမ်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မော်တာတုံ့ပြန်မှုအသစ်အဆန်းမှအထွတ်အထိပ်တုံ့ပြန်မှုပြသသောသူတို့ကို SN / VTA voxels အပါအဝင်အထင်ကရနှစ်နိုင်ငံ HR သာအနီရောင်နျူကလိယအတွက်ဒါပေမယ့်လည်း SN / VTA နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပစ်မှတ်ထား။ အသစ်အဆန်းမတူဘဲ, သို့သော်ဤ voxels ၏ပစ်မှတ်နာရီ (SN / VTA MTR နှင့်အတူမပတျသကျဘူးP ≥ 0.5) သို့သော်ဘာသာရပ်၏တုံ့ပြန်မှုအချိန်များနှင့်ပစ်မှတ်များနှင့်အဆိုးဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့သည် (r = -0.42, P = 0.056) ။ ထို့ပြင် SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်း HR (တုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူမပတျသကျဘူးr = 0.16, P = 0.5), နှင့်မျှမ targetness မှ SN / VTA HR အကြားဆက်စပ်မှုများနှင့်အသက်အရွယ် (ရှိခဲ့P ≥ 0.5) ။
အဆိုပါ hippocampal-SN / VTA မော်ဒယ်အဟောင်းများလူကြီးများအတွက်အသစ်အဆန်းမှလူ့ SN / VTA နှင့် hippocampus ၏တုန့်ပြန်ပြင်းအားပူးတွဲ SN / VTA နှင့် hippocampus အတွင်းသမာဓိကဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌, amygdala ကိုတိုက်ရိုက် hippocampal-SN / VTA အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အထောက်အကူပြုတော်မမူကြောင်းပေးထား, hippocampal မဟုတ်သလို SN / VTA အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုမ amygdala အတွင်းသမာဓိရှိသဖြင့်ထိခိုက်ရပါမည်။ ဤသည်ကိုအတိအကျကျနော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိသောပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ SN / VTA, amygdala နှင့် hippocampus ၏ MTRs စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ SN / VTA နှင့် hippocampus အကြားတစ်ဦးရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းမှု-function ကိုကြားဆက်ဆံရေးရှုလေ့လာကြသည်။ (SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်, သူတို့သည်သက်ဆိုင်ရာ MTRs ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5B,H) ။ ပို. အရေးကြီးသည်, hippocampal အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုလည်း (ထို SN / VTA ၏ MTR ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5G), နှင့် SN / VTA အတွက်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကို (hippocampus ၏ MTR ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 5C) ။ အဆိုပါ amygdala ၏ MTR အဆိုပါ SN / VTA (ဖြစ်စေ၏အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံသောကြောင့်ဤအ Interregional ဖွဲ့စည်းပုံမှာ-function ကိုကြားဆက်ဆံရေး MTR ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ဒေသတွင်း unspecific အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထင်ဟပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်သဖန်းသီး။ 5E) မ hippocampus (သဖန်းသီး။ 5J) ။ အဆိုပါ amygdala အတွက် MTRs အကြားအားနည်းဆက်စပ်မှုနှင့် SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက် MTR အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမည်သည့်ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်းအတွက် amygdala အတွက်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ဖို့ HR, သို့သော်, ရှိခဲ့သည်။ အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် SN / VTA နှင့် hippocampus အတွင်းရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းမှု-function ကိုကြားဆက်ဆံရေးဤတွေ့ရှိချက်များ (အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် hippocampal-SN / VTA ကွင်းဆက်အဘို့ခိုင်ခံ့ထောက်ခံမှုပေးLisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005).
အသက်ကြီးလူကြီးများ၏ SN / VTA MTR (ကျွန်ုပ်တို့၏ငယ်ရွယ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုထက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သဖန်းသီး။ 4), ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခု Interregional ဆက်စပ်မှုကျော်လွန်သွားနှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုနားလည်ရန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းအကြံပြု။ သို့သော်အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်ဒီ SN / VTA MTR လျှော့ချရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအသက်နှင့် MTR အကြားဆက်စပ်မှုသို့ဘာသာပြန်ရန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီတစျခုမှာယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ရှင်းပြချက်အဟောင်းဘာသာရပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာများ၏အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းသောအသက်အပိုင်းအခြားသည်။ ဒါဟာ (hippocampal volumes ကိုလည်းကျဉ်းမြောင်းတဲ့အသက်အရွယ်နမူနာများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးဆက်စပ်မပြကြဘူးကြောင်း, ဥပမာ, လူသိများသည်Szentkuti et al ။ 2004; Schiltz et al ။ 2006) ဒါပေမယ့် 20s ထံမှ 80s အထိနမူနာအတူဆက်စပ်မှုကိုပြသကြဘူး (Raz နှင့် Rodrigues 2006) ။ ၎င်းသည်အသက်အပိုင်းအခြားဟာ 20s အတွက်စတင်နှင့်နှောင်းပိုင်း 80s အထိအတူအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်လည်းအသက်အရွယ်နှင့် SN / VTA MTR အကြားဆက်စပ်မှုသို့ဘာသာပြန်ဆိုမယ်လို့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ဆက်စပ်နေပါတယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတင်ပြထားတယ်။ ခန္ဓာဗေဒဒေတာထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမျက်နှာသာ။ အဆိုပါ hippocampus တိုက်ရိုက်ပထမ, SN / VTA စီမံကိန်းများကို (Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ အဆိုပါ hippocampus အဆိုပါ SN / VTA တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပါဘူးပေမယ့်စက္ကန့်, သူက (အ SN / VTA ဖို့အဓိကနှင့်ဖြစ်ကောင်းတဲ့အသစ်အဆန်း signal ကို၏တစ်ဦးတည်းသောမူလအစဖြစ်ပါတယ်Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ ဤ (အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်း်ပတ်သက်နေခဲ့ကြကြောင်းကြောင့်အခြား medial ယာယီဒေသများဖြစ်ပါသည်ဘရောင်းနှင့် Aggleton 2001), အ perirhinal cortex ကဲ့သို့သော, (ထို ventral striatum ရန်အလွန်အားနည်းနေစီမံချက်များရှိFriedman et al ။ 2002) နှင့်ထို့ကြောင့် SN / VTA တစ်ခုထိရောက်သောအသစ်အဆန်း signal ကိုပေးမယုံကြည်နေကြသည် (Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005).
ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့Bunzeck နှင့် Duzel 2006), အ SN / VTA ရှားပါးသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence ဖို့ထက်အသစ်အဆန်း stimulus ဖို့ပိုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များ (မတူပဲBunzeck နှင့် Duzel 2006), SN / VTA သိသိသာသာ Target နှင့်အထက်လူကြီးများအတွက်၎င်း၏ဆက်စပ်မော်တာတုံ့ပြန်မှုများက activated ခဲ့သည်။ Target မှ The HR အဆိုးပစ်မှတ်မှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအောင်သို့ SN / VTA အဆောက်အဦများနှင့်ဆက်စပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အရင်းအမြစ်များခွဲဝေချထားပျော့မော်တာပြဿနာများအတွက်အစားထိုးယန္တရားများကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, အကြံပြု, တုံ့ပြန်မှုအချိန်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့စာရင်းအင်းခုံမှာကျွန်တော်ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများ (ကဲ့သို့ midbrain အတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိနှစ်ဦးစလုံးအတူတူအရည်အသွေးပုံစံလေ့လာတွေ့ရှိကြောင်း, သို့သော်သတိပြုသင့်ပါတယ်Bunzeck နှင့် Duzel 2006) ။ အထူးသဖြင့်, ထို midbrain အတွင်း, Target တုံ့ပြန်မှု (အနီရောင်နျူကလိယမှချုပ်ထားခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 3H) ။ ထို့ကွောငျ့ကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်ပစ်မှတ်တုံ့ပြန်မှုသို့ SN / VTA များ၏ခွဲဝေအထူးသဖြင့်သူတို့အဟောင်းများကိုနှေးကွေးတုံ့ပွနျမှုအဆနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူမဟုတ် targetness ဖို့ midbrain ၏တုန့်ပြန်နေတဲ့အရည်အသွေးပြောင်းလဲမှုအတွက်အရေအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုထင်ဟပ်စေသည်ပုံရသည်။ SN အာရုံခံသိပ်သည်းဆတစ်ဦးမကြာသေးခင်က postmortem ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခုနှစ်, PD မရှိဘဲကျန်းကျန်းမာမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက် SN အတွက်အာရုံခံအရှုံးပြသ, ဤဆုံးရှုံးမှုထိုကဲ့သို့သော bradykinesia နှင့်သွားမညီမမျှ (အဖြစ်ပျော့ parkinsonian ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်ရော့စ် et al ။ 2004) ။ ဒါဟာနှေးကွေးတုံ့ပွနျမှုအကြိမ်အလှည့်အတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက် SN / VTA တစ်ခုတိုးလာ drive ကိုနှင့်ဆက်စပ်သောပျော့ bradykinesia, ရောင်ပြန်ဟပ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။ အရေးကြီးတာက, အဲဒါကိုတစ်ခုပေးခြင်းမော်တာတုံ့ပြန်မှုမရှိခြင်းအတွက် "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ count က" သို့မဟုတ်ပစ်မှတ်၏ "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေး" လိုအပ်မယ့်လုပ်ငန်းတာဝန်ငယ်ရွယ်အတွက်ပစ်မှတ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော midbrain HR ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရရန်ကျန်ရှိနေဆဲကြောင်းသတိပြုသင့်ပါတယ် အဟောင်းလူကြီးများအတွက်။
အဆိုပါ hippocampus နှင့်အထက်လူကြီးများရဲ့ amygdala (ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အားထငျရှားထူးဆန်းတဲ့နှင့် Dolan 2001; ယာမာဂူချီ et al ။ 2004; Crottaz-Herbette et al ။ 2005) ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများ (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့Bunzeck နှင့် Duzel 2006ဒါဟာအသစ်အဆန်းမှတုန့်ပြန်သောကြောင့်,), အ hippocampus (ထို SN / VTA ထက်လျော့နည်းရွေးချယ်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3D,E) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ရှားပါး (သဖန်းသီး။ 3G) ။ အဆိုပါ amygdala, အခြားတစ်ဖက်တွင်, သိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ valence (တုန့်ပြန်သောတစ်ခုတည်းသောဒေသဖြစ်ခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 3F) ။ အသက်ကြီးလူကြီးများအတွက်ယခင်လေ့လာမှုများအကျွမ်းတဝင်ကြားနေမျက်နှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြောက်မျက်နှာများကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများ (ထဲတွင် amygdala တစ်ကြံ့ခိုင် activation နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဝတ္ထုပြခဲ့ကြWright et al ။ 2006) ။ ပစ္စုပ္ပန် data တွေကိုအကျွမ်းတဝင်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (မျက်နှာများနှင့်မြင်ကွင်းများ) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်အကျွမ်းတဝင်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောလှုံ့ဆော်မှု (မျက်နှာများနှင့်မြင်ကွင်းများ) ဖို့ amygdala ၏ကြံ့ခိုင် activation လည်းရှိကွောငျးဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံဒီတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။
ယခင်လေ့လာမှုများတစ်အရေအတွက်ကအဖြစ်အပျက်-related အလားအလာ (ERPs) ကို အသုံးပြု. အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါပြီ။ ဆန္ဒအလျောက် Self-ပွေးညီကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းဝတ္ထုအမြင်အာရုံပုံရိပ်တွေဖို့အာရုံကိုခွဲဝေချထားပေးရန်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါ, High-performing အဟောင်းတွေလူကြီးများ (လျော့နည်းသွားအသစ်အဆန်း-related P300 တုံ့ပြန်မှုမရှိနိမိတ်လက္ခဏာကိုပြDaffner et al ။ 2006) ။ တကယ်တော့သူတို့၏ P300 amplitude ပင်ဖြစ်နိုင်သည်အဟောင်းတွေလူကြီးများ (မှာရှိတဲ့ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုဖို့ပိုကြိုးစားအားထုတ်မှု Oriental အကြံပြုခြင်းတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်Daffner et al ။ 2006) ။ ဒါဟာအယူအဆနှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex ဟာအသစ်အဆန်း P300 (များ၏မျိုးဆက်အတွက်ပါဝင်ကြောင်းအကြံပြုကိုတွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများနှင့်အတူသဟဇာတဖြစ်Soltani နဲ့ Knight 2000) နှင့်ကြောင်းကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများမကြာခဏ (ဖြစ်နိုင်သည်အားထုတ်မှုအစားထိုးယန္တရားများကိုညွှန်းထိုကဲ့သို့သော Episode encoding ကအဖြစ်သိမြင်တာဝန်များကိုအတွက်လျော့နည်း hemisphere အကြာတွင်ပြသDolcos et al ။ 2002) ။ သူတို့ / VTA နှင့် hippocampi လျော့နည်းနဂိုအတိုင်း SN နှင့်အတူအဟောင်းများလူကြီးများအတွက်လျော့နည်းသွား mesolimbic အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုပြသသောကြောင့် data ကိုအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏ ERP လေ့လာမှုများ၏ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်တစ်ခုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအသက်ကြီးလူကြီးများဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုမှ orienting ပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှု prefrontal ခြင်းဖြင့်လျော့နည်းသွား mesolimbic အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ အကယ်. နှင့်အထက်လူကြီးများအတွက် P300 အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုထိုကဲ့သို့သောအားထုတ်မှု Oriental နှင့်ဆက်စပ်သောလျှင်, တဦးတည်း, ဤဘာသာရပ်များအတွက်အသစ်အဆန်း P300 အဆိုပါ SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက် MTR လျော့ကျလာနှင့်အတူလွှဲခွင်တိုးပွါးသင့်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက, ဒီသာမန်အိုမင်းစဉ်အတွင်း prefrontal cortex ၏သမာဓိ mesolimbic လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကျဆင်းမှု၏လျော်ကြေးများအတွက်ခွင့်ပြုယူဆတယ်။ prefrontal cortical နှင့် mesolimbic လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် / သို့မဟုတ်သမာဓိဆုံးရှုံးမှုများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုရှိလြှငျသို့သော်ဤကိစ္စတွင်မဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျန်းမာအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တစ်ဦးကကောင်းစွာပွားမူမမှန် (အထပ်ထပ်အားဖြင့်အသစ်အဆန်း P300 တစ်လျော့နည်းသွားလေ့၏ဖြစ်ပါသည်Friedman et al ။ 1998; Daffner et al ။ 2006; Weisz နှင့် Czigler 2006) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ mesolimbic အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုနှုန်း se အခြေခံအဆောက်အဦးအတွက် SN / VTA ပြောင်းလဲမှုများနှင့် hippocampus စပ်လျဉ်းလျော့နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက်ဝတ္ထု oddballs ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်ခဲ့ပေးထားလေ့ကိုလေ့လာကြပြီမဟုတ်ကြောင်း။ ပြသ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာ SN / VTA နှင့် hippocampus အတွက်အနိမ့် MTRs နှင့်အတူလျော့ခံရဖို့အပြင်, ထိုဒေသများအတွက်အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းလျော့နည်းသွားလေ့ကိုပြသသောဖြစ်နိုင်ခြေမှလေးစားမှုနှင့်အတူအရှင်ကြားနေဖြစ်ကြသည်။
အပြင်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, electrophysiological အသံသွင်းတဲ့ကျယ်ပြန့်, လူနာလေ့လာမှုများ (ထံမှBaudena et al ။ 1995; Daffner et al ။ 2000) နှင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ (Opitz et al ။ 1999; Clark က et al ။ 2000) (ထို prefrontal နှင့် orbitofrontal cortical ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ကြet al အုပျစိုး။ 2002) (အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ယာမာဂူချီ et al ။ 2004) ။ အသစ်အဆန်း, ရှားပါးနှင့်ပစ်မှတ်ဖို့နာရီကျွန်တော်တို့ရဲ့န့်အသတ်ပုံရိပ် volume ထဲမှာခန္ဓာဗေဒကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်နေစဉ်, အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူတဲ့အပြည့်အဝအသံအတိုးအကျယ်အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း prefrontal နှင့် orbitofrontal cortical နှင့် mesolimbic အဆောက်အဦများအကြား functional relationship အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အနှစ်ချုပ်ရန်, mesolimbic သည့်စနစ်အတွင်းကဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိအသက်အရွယ်-related ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်အပြောင်းအလဲများကို၏ပုံစံအသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့တစ် hippocampal-SN / VTA ကွင်းဆက်ထောက်ပံ့ပေး။ ဒါဟာယခုကွင်းဆက်အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့အပြောင်းအလဲများကိုအဟောင်းတွေလူကြီးများအတွက် Episode မှတ်ဉာဏ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေမည်ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်သည်ခံရဖို့နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ဤတွေ့ရှိချက်များအနိမ့် SN / VTA MTRs နှင့်အသစ်အဆန်းမှလျော့နည်းသွား mesolimbic တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အဟောင်းတွေလူကြီးများ dopaminergic အစားထိုးမှအကျိုးအံ့သောငှါ ဆက်စပ်. အ။ dopamine agonists postsynaptic dopamine receptors ၏တစ်ဦးထက်ပိုလုပ်သူများ activation ကွိုးစားအားထုလိမ့်မယ်သော်လည်းအဆိုပါ dopamine ရှေ့ပြေး levodopa (L-DOPA) အများအားဖြင့်, ဆောင်ယူခြင်းကိုခံများနှင့်ပြောင်းလဲ dopaminergic အာရုံခံအားဖြင့်၎င်း, ထို့နောက် phasically အဆိုပါ Synaptic ကွဲသို့ဖြန့်ချိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် L-DOPA အသစ်အဆန်းတုံ့ပြန် phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြီးသား (ကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများအတွက်အထပ်ထပ်မှတဆင့်အသစ်သောဝေါဟာရ၏သင်ယူမှုမြှင့်တင်ရန်ပြသထားသည်Knecht et al ။ 2004; Breitenstein et al ။ 2006စကားများ) နှင့်မှတ်ဉာဏ်အပြောင်းအလဲနဲ့ (Newman က et al ။ 1984) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ကျန်းမာအဟောင်းတွေဘာသာရပ်များအတွက်မော်တာမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း (Floel et al ။ 2005, 2006) ။ Pharmacological လေ့လာမှုများ SN / VTA အတွက်အနိမ့် MTRs နှင့်အတူအဟောင်းများလူကြီးများအတွက်က L-DOPA နှင့် dopamine agonists ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။
ဒီလေ့လာမှုက Magdeburg တက္ကသိုလ်ကနေ Deutsche Forschungsgemeinschaft (Klinische Forschergruppe "Kognitive Kontrolle" TP1) နှင့် BMBFT (Cai) မှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ data တွေကိုရှာမှီးနှင့်အတူအကူအညီအတွက် fMRI ဒီဇိုင်းနှင့် Ulrike Malecki နှင့် Ana Blanco နှင့်အတူအကူအညီအတွက်မိုက်ကယ် Scholz ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ: အဘယ်သူမျှမကြေညာခဲ့သည်။
အဆိုပါအာဘော် 2007 ©။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်က Press ကထုတ်ဝေသည်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ ခွင့်ပြုချက်အဘို့,-mail ကိုငကျေးဇူးပြုပြီး: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Whitfield-Gabrieli S က,
။ ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်သင်ယူမှု: mesolimbic activation မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး precedes ။ အာရုံခံဆဲလျ 2006; 50: 507-517 ။
Ashburner J ကို,
။ Voxel-based morphometry-နည်းလမ်းများ။ Neuroimage 2000; 11: 805-821 ။
Audoin B က,
Thompson က AJ,
စက်ရုံ GT ကို,
Miller က DH
။ optic neuritis အောက်ပါအမြင်အာရုံ cortex အတွက်ရွေးချယ်သံလိုက်လွှဲပြောင်းအချိုးကျဆင်းခြင်း။ ဦးနှောက်ကို 2006; 129: 1031-1039 ။
au Duong သင်္ဘော MV,
Confort-Gouny S က,
Viout P ကို,
Pelletier J ကို,
။ MTR ပုံရိပ်တွေ၏ Voxel-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: မျိုးစုံနဗ်ကြောများ၏အစောဆုံးအဆင့်မှာလူနာအတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စမူမမှန်နေရာချထားရန်နည်းလမ်း။ J ကို Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Imaging 2004; 20: 765-771 ။
, ME Bach
Barad M က,
Zhuo M က,
Shih R ကို,
။ Spatial မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related ချို့ယွင်းချက်စသည်တို့အတွက် hippocampal ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းကအဆင့်ချို့ယွင်းချက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်နှင့်စခန်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် attenuated နေကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1999; 96: 5280-5285 ။
Backman L ကို,
Ginovart N ကို,
Dixon က RA,
Halldin ကို C,
။ အဆိုပါ striatal dopamine စနစ်ကပြောင်းလဲမှုများကကမကထပြုခဲ့အသက်အရွယ်-related သိမြင်လိုငွေပြမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2000; 157: 635-637 ။
Baudena P ကို,
။ ရှားပါးပစ်မှတ်နှင့် distractor အာရုံနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှ Intracerebral အလားအလာ။ III ကို။ တိုကျရိုကျ cortex ။ Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1995; 94: 251-264 ။
Benedetti B က,
Rovaris M က,
Valsasina P ကို,
Filippi M က
။ , သမားရိုးကျ MT နှင့်၎င်းကို MRI အားဖြင့်အကဲဖြတ်ဦးနှောက်မီးခိုးရောင်ဖြူကိစ္စအပြောင်းအလဲများကိုအပေါ်အိုမင်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အာရုံကြော 2006; 66: 535-539 ။
Breitenstein ကို C,
Korsukewitz ကို C,
Wailke S က,
Bushuven S က,
Knecht S က
။ ပါရာဒိုင်းတွေရဲ့တစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ: noradrenergic ထံမှသင်ယူမှု၏ dopaminergic မော်ဂျူသလော J ကို Neurol သိပ္ပံ 2006; 248: 42-47 ။
။ အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်: အ perirhinal cortex နဲ့ hippocampus များ၏အခန်းကဏ္ဍဘာတွေလုပ်နေလဲ? နတ်ဗြာ neuroscience 2001; 2: 51-61 ။
Bunzeck N ကို,
Duzel E ကို
။ လူ့ substantia nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာနိုင်တဲ့ coding ။ အာရုံခံဆဲလျ 2006; 51: 369-379 ။
Clark က VP,
Fannon S က,
Benson R ကို,
Bauer L ကို
။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI သုံးပြီးရှားပါးအမြင်အာရုံပစ်မှတ်များနှင့်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol 2000; 83: 3133-3139 ။
Cortes R ကို,
Gueye B က,
။ လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ Dopamine receptors: D1 ဆိုဒ်များ autoradiographic ဖြန့်ဖြူး။ neuroscience 1989; 28: 263-273 ။
Crottaz-Herbette S က,
Menon V ကို
။ deviant အာရုံနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုများ၏ထောက်လှမ်းအတွက် Hippocampal ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Hippocampus 2005; 15: 132-139 ။
Calvo V ကို,
Faust R ကို,
Holcomb P ကို
။ ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များမှအာရုံစူးစိုက်မှုကို directing အတွက် prefrontal cortex ၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ။ ဦးနှောက်ကို 2000;123(Pt 5):927-939.
Williams က DM,
။ သိမြင်မှုမြင့်မားသောလူကြီးများဖျော်ဖြေကြားတွင်အသစ်အဆန်းအာရုံထဲမှာအသက်အရွယ်-related ကွဲပြားခြားနားမှု။ Biol Psychol 2006; 72: 67-77 ။
။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်အသက်ကြီးကိစ္စသမာဓိရှိနှင့်သိမှတ်ခံစားမှုဖြူ၏။ အာရုံကြော 2006; 66: 505-512 ။
Dolcos က F,
Cabeza R ကို
။ hemisphere asymmetry နှင့်အိုမင်း: ညာဘက် hemisphere ကျဆင်းမှုသို့မဟုတ် asymmetry လျော့ချရေး။ neuroscience Biobehav ဗြာ 2002; 26: 819-825 ။
Eckert T က,
Sailer M က,
Kaufmann J ကို,
Schrader ကို C,
Peschel T က,
Bodammer N ကို,
။ Idiopathic ပါကင်ဆန်ရောဂါ၊ စနစ်အမျိုးမျိုးကျုံ့ခြင်း၊ အဆင့်မြင့် supranuclear လက်ခြေသေမှုနှင့် magnetization transfer ပုံရိပ်ကို သုံး၍ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများကိုခွဲခြားခြင်း။ Neuroimage 2004; 21: 229-235 ။
Ekman P ကို,
။ Palo Alto (CA): အတိုင်ပင်ခံစိတျပညာစာနယ်ဇင်း; 1976 ။ မျက်နှာများ၏ရုပ်ပုံများ [ဆလိုက်] အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
Fasano M က,
Bergamasco B က,
Lopiano L ကို
။ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်သံ - neuromelanin စနစ်၏ပြုပြင်မွမ်းမံ။ J ကို Neurochem 2006; 96: 909-916 ။
Fazekas က F,
Ropele S က,
Enzinger ကို C,
Gorani က F,
ရော့ K သည်,
Schmidt က R ကို
။ အဖြူကိစ္စ hyperintensities ၏ MTI ။ ဦးနှောက်ကို 2005; 128: 2926-2932 ။
။ အိုမင်းခြင်းနှင့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ: substantia nigra ဒေသဆိုင်ရာရွေးချယ်မှု။ ဦးနှောက်ကို 1991;114(Pt 5):2283-2301.
Tozer DJ သမား,
။ သံလိုက်လွှဲပြောင်းမျိုးစုံနဗ်ကြောရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဆေးခန်းအထီးကျန် syndrome အတွက် histograms ။ ဦးနှောက်ကို 2005; 128: 2911-2925 ။
Celnik P ကို,
Gingert ကို C,
Sawaki L ကို,
Knecht S က,
Cohen ကို LG က
။ တစ်မော်တာမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် Dopaminergic လွှမ်းမိုးမှု။ အမ်း Neurol 2005; 58: 121-130 ။
Xu B က,
Herscovitch P ကို,
။ Levodopa သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် striatum အတွက်မှတ်ဉာဏ် encoding ကနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွားစေပါသည်။ Neurobiol အို။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်နိုဝင်ဘာလ 10 ၏ EPub 2006; 200:6။
။ Mini-စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်စာမေးပွဲ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1983; 40: 812 ။
Kazmerski VA သို့,
။ တက်ရောက်ရန်စဉ်အတွင်းအသစ်အဆန်း P3 အပေါ်အိုမင်းခြင်းနှင့် oddball တာဝန်များကိုလျစ်လျူရှု၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychophysiology 1998; 35: 508-520 ။
။ ယင်းနျူကလိယမှ hippocampal, amygdala နှင့် perirhinal စီမံကိန်း၏နှိုင်းယှဉ် accumbens: အမျောက်များဦးနှောက်ထဲမှာပေါင်းစပ် anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စလေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol 2002; 450: 345-365 ။
ဖလက်ချာ P ကို,
Turner R ကို
။ အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI: differential ကိုတုံ့ပြန်မှု characterizing ။ Neuroimage 1998; 7: 30-40 ။
။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက်စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ: အထွေထွေ linear ချဉ်းကပ်။ Hum ဦးနှောက် Mapp 1994; 2: 189-210 ။
။ ကြွက်များတွင် mesohippocampal dopaminergic စနစ်၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်သွေးဆောင် Spatial မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်း။ neuroscience 1996; 74: 1037-1044 ။
Ge Y ကို,
မမေ့ဘူး RI က,
။ သာမန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related စုစုပေါင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စနှင့်အဖြူကိစ္စအပြောင်းအလဲများကို။ အပိုင်း II ကို: အရေအတွက်သံလိုက်လွှဲပြောင်းအချိုး Histogram ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ နံနက် J ကို Neuroradiol 2002; 23: 1334-1341 ။
Hanyu H ကို,
Asano T က,
Iwamoto T က,
Takasaki M က,
Shindo H ကို,
ရှင်ဇိုအာဘေး K သည်
။ သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်အခြားစိတ်ဖောက်ပြန်မှုအမျိုးအစားများရှိလူနာများတွင် hippocampus ၏သံလိုက်ဓာတ်လွှဲခြင်းကိုတိုင်းတာသည်။ နံနက် J ကို Neuroradiol 2000; 21: 1235-1242 ။
Sakurai H ကို,
Takasaki M က
။ hippocampal ပျက်စီးမှုနှင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်နှောက် cortical function ကိုအကြားဆက်ဆံရေး။ နိပွန် Ronen Igakkai Zasshi 2000; 37: 921-927 ။
Shimizu က S,
Tanaka Y ကို,
Kanetaka H ကို,
အယ်ဒီတာများ။ Lewy အလောင်းများနှင့် Alzheimer ရောဂါတို့နှင့်အတူစိတ်ဖောက်ပြန်မှုအကြား hippocampus ၏ magnetization transfer အချိုးများတွင်ကွာခြားချက်များ။ neuroscience လက်တ 2005; 380: 166-169 ။
Hinrichs H ကို,
Scholz က M,
Tempelmann ကို C,
။ ခြေရာခံခြင်းလွှဲခွင်မူကွဲ: အစာရှောင်ခြင်း-နှုန်းကိုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းများအတွက်အဖြစ်အပျက်-ဆက်စပ် fMRI တုံ့ပြန်မှု၏ Deconvolution ။ J ကို Cogn neuroscience 2000;12 Suppl 2:76-89.
Tortorella ကို C,
။ တင်ဆက်မှုမှာမျိုးစုံနဗ်ကြောရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဆေးခန်းအထီးကျန် Syndrome နှင့်အတူလူနာအတွက် MR နှင့်သံလိုက်လွှဲပြောင်းပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်များ၏၏အခြင်းတန်ဖိုး။ နံနက် J ကို Neuroradiol 2000; 21: 1034-1038 ။
Kamping S က,
Zwitserlood P ကို,
။ Levodopa: ပုံမှန်လူသားတွေအတွက်သင်ယူမှုပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စကားလုံး။ အမ်း Neurol 2004; 56: 20-26 ။
။ နည်းပညာဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ A-5 ။ Gainesville (FL): Psychophysiology, ဖလော်ရီဒါတက္ကသိုလ်မှသုတေသနများအတွက် Center က; 2001 ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထိခိုက်စေရုပ်ပုံစနစ် (IAPS): ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေ ratings ။
သံပုရာ N ကို,
။ Dopamine D1 / D5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဆင့်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ receptors ။ J ကို neuroscience 2006; 26: 7723-7729 ။
။ Spatial အသစ်အဆန်းမှထိတွေ့မှုအားဖြင့် hippocampal CA1 အတွက် LTP သော induction ၏ Dopamine-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ။ နတ် neuroscience 2003; 6: 526-531 ။
။ အဆိုပါ hippocampal-VTA ကွင်းဆက်: ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့အချက်အလက်များ၏ entry ကိုထိန်းချုပ်။ အာရုံခံဆဲလျ 2005; 46: 703-713 ။
Newman က RP,
Weingartner H ကို,
Smallberg လုပ် SA,
။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ automatic မှတ်ဉာဏ်: dopamine ၏ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံကြော 1984; 34: 805-807 ။
Opitz B က,
။ အသစ်အဆန်းအပြောင်းအလဲနဲ့၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: ပေါင်းစပ် ERP နှင့် fMRI ရလဒ်များကို။ Cereb Cortex 1999; 9: 379-391 ။
။ D1 / D5 dopamine အဲဒီ receptor activation CA1 hippocampal synapses မှာအစောပိုင်းရေရှည်အလားအလာများ၏ပြင်းအားတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience 1996; 16: 7478-7486 ။
Packard တို့ MG,
။ hippocampal-မှီခိုနှင့် caudate နျူကလိယ-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်စဉ်များ၏ Amygdala မော်ဂျူ။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 1994; 91: 8477-8481 ။
Rademacher J ကို,
Engelbrecht V ကို,
Freund H ကို,
Zilles K သည်
။ သံလိုက်လွှဲပြောင်း MR နှင့်အတူလူ့အဖြူကိစ္စဖိုင်ဘာဝစော၏ Vivo myelination အတွက်တိုင်းတာခြင်း။ Neuroimage 1999; 9: 393-406 ။
Raz N ကို,
။ ဦးနှောက်၏ differential အိုမင်း: ပုံစံများ, သိမြင်မှုဆက်စပ်မှုနှင့် modifiers ။ neuroscience Biobehav ဗြာ 2006; 30: 730-748 ။
Lonnberg P ကို,
Marjamaki P ကို
။ လူ့ဦးနှောက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အတွက်ခေတ်-မှီခိုကျဆင်း။ ဦးနှောက် Res 1990; 508: 349-352 ။
Ross က GW,
Petrovitch H ကို,
နယ်လ်ဆင် J ကို,
Markesbery W က,
Davis က D:,
Hardman J ကို,
Launer L ကို,
Masaki K သည်,
။ Parkinsonian ပုပ္ပနိမိတ်နှင့် PD မပါဘဲ decendents အကွီးအကဲမြားအတွက် substantia nigra အာရုံခံဆဲလျသိပ်သည်းဆ။ အမ်း Neurol 2004; 56: 532-539 ။
နိုက် RT ကို
။ Orbitofrontal cortex နဲ့စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှု၏ပြောင်းလဲနေသော filtering ကို။ Cogn ပြုမူနေ neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု 2002; 2: 264-270 ။
Schiltz K သည်,
Guderian S က,
။ သက်ကြီးရွယ်အိုများလူသားတွေအတွက် hippocampal ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်မှတ်ဉာဏ် function ကိုအကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ J ကို Cogn neuroscience 2006; 18: 990-1003 ။
Tischmeyer W က,
။ အဆိုပါ dopaminergic midbrain လူ့ Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ပါဝင်: မျိုးရိုးဗီဇပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience 2006; 26: 1407-1417 ။
။ dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol 1998; 80: 1-27 ။
Seeman P ကို,
Bergeron ကို C,
Becker က LE,
Riederer P ကို,
Jellinger K သည်,
Watanabe က S,
။ ကလေးများနှင့်အိုမင်းလူကြီးများအတွက်လူ့ဦးနှောက် dopamine receptors ။ synapses 1987; 1: 399-404 ။
Seppi K သည်,
။ neurodegenerative Parkinson ၏ differential ကိုရောဂါအတွက်သမားရိုးကျနှင့်အဆင့်မြင့်သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နည်းစနစ်တခုတခုအပေါ်မှာ update ကို။ Curr Opin Neurol 2005; 18: 370-375 ။
Yamada T က,
Takahashi H ကို,
Kimura H ကို
။ လူ့ positron ထုတ်လွှတ် tomographic [18F] fluorodopa လေ့လာမှုများ dopamine ဆဲလ်အရေအတွက်နှင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပတျသကျ။ အမ်း Neurol 1993; 34: 324-330 ။
Soltani M က,
။ အဆိုပါ P300 ၏အာရုံကြောဇစ်မြစ်။ Crit ဗြာ Neurobiol 2000; 14: 199-224 ။
။ oddball လှုံ့ဆော်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် anterior hippocampal တုံ့ပြန်မှု။ Hippocampus 2001; 11: 690-698 ။
။ quantitative MR အဆိုပါ hippocampus ၏လေ့လာဆန်းစစ်: အိုမင်းအတွက် unspecific ဇီဝဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို Neurol 2004; 251: 1345-1353 ။
Dehmeshki J ကို,
Brex PA ဆိုပြီး,
။ က MS ရဲ့သဘောထားအကြံပြုချက်များဆေးခန်းအထီးကျန် syndrome အတွက်ဦးနှောက်တစ်သျှူး MTR Histogram ပုံမှန်-ထင်ရှားကျော်ကြားသော။ အာရုံကြော 2002; 59: 126-128 ။
Weisz J ကို,
။ ခေတ်နှင့်အအသစ်အဆန်း: အဖြစ်အပျက်-related ဦးနှောက်အလားအလာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလှုပ်ရှားမှု။ Psychophysiology 2006; 43: 261-271 ။
။ dopaminergic midbrain ၏ဆုလာဘ်-ဆက်စပ် FMRI activation တိုးမြှင် hippocampus-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 2005; 45: 459-467 ။
Wolff SD က,
Balaban သည် RS
။ သံလိုက်လွှဲပြောင်းဆနျ့ကငျြဘ (မယ်တော်ဆေးခန်း) နှင့် Vivo အတွက်တစ်ရှူးရေပရိုတွန်အပန်းဖြေ။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med 1989; 10: 135-144 ။
Williams က D:,
။ ဝတ္ထု၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများကျန်းမာနုပျိုနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူကြီးများအတွက် amygdala ကိုသက်ဝင်။ Neurobiol အို 2006; 27: 361-374 ။
Hale က LA က,
။ ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များမှလျင်မြန်စွာ prefrontal-hippocampal လေ့။ J ကို neuroscience 2004; 24: 5356-5363 ။
Huang က V ကို,
Adey M က,
။ တစ်ဦးသက်ကြီးရွယ်အိုများစိတ်ကျရောဂါစိစစ်စကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြု: တစ်ပဏာမအစီရင်ခံစာ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res 1982; 17: 37-49 ။
လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်ချက်၏ Pharmacological Dissociation Cereb Cortex (2014) 24 (5): 1351-1360
အပြည့်အဝစာသား (HTML) ကို
နျူကလိယ Accumbens လုပ်ဆောင်ချက် Salience ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ Dissociates: လူ့ Intracranial မှတ်တမ်းများမှအထောက်အထား ဂျေ neuroscience ။ (2013) 33 (20): 8764-8771
Contextual ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းဆုကြေးရှိလာ၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Dynamics ကို modulates ဂျေ neuroscience ။ (2011) 31 (36): 12816-12822
လူ့ Ventral Tegmental ဧရိယာထဲမှာ Dopaminergic နေရင်မြန်အောင်နျတှေး BOLD တုံ့ပြန်ချက် သိပ္ပံ (2008) 319 (5867): 1264-1267